Ukugenca Ngokuziphatha: Izicelo zamahhala nezivuliwe ze-GNU / Linux Distro yakho | Kusuka kuLinux
Namuhla, sizoqhubeka nokuningi kokuthunyelwe kwethu okuhlobene nesihloko «Ukugenca Nokugqekeza » mayelana noMhlaba we Isoftware yamahhala, Umthombo Ovulekile kanye ne-GNU / Linux. Ukwenza lokhu, sizogxila kumqondo we "Ukugenca kokuziphatha" futhi i Izicelo zamahhala nezivuliwe yaleyo ndawo esingayisebenzisa ku- I-GNU / Linux Distro.
Futhi kungani ku-GNU / Linux? Ngoba kuyaziwa ukuthi ochwepheshe emkhakheni we «Ukugenca Nokugqekeza » bakhetha i-GNU / Linux kune-Windows, MacOS noma enye, ngomsebenzi wabo wobuchwepheshe, ngoba, phakathi kwezinto eziningi, inikeza inani elikhulu lokulawula entweni ngayinye yayo. Futhi, kungani kunjalo yakhiwe kahle futhi yahlanganiswa ezungeze i- Isixhumanisi somugqa womyalo (CLI), okungukuthi, i-terminal yakho noma i-console. Ngaphezu kwalokho, kungaphezulu ephephile futhi esobala ngoba imahhala futhi ivulekile, futhi ngoba iWindows / MacOS imvamisa iba yinto ekhangayo.
Ngaphambi kokungena ngokugcwele engqikithini ye- "Ukugenca kokuziphatha"Njengenjwayelo, ngemuva kokufunda le ncwadi, sincoma ukuthi uvakashele izincwadi zethu zangaphambilini ezihlobene nesihloko se- «UHacker », njenge:
1 Ukugenca Ngokuziphatha: Abaduni bangabafana abahle, amaCrackers awekho!
1.1 Abaduni nabaduni
1.1.2 Isigenge sekhompyutha
1.2 Kuyini ukugenca kokuziphatha?
1.3 Izinhlelo zokusebenza zamahhala, ezivulekile nezikhululekile
Ukugenca Ngokuziphatha: Abaduni bangabafana abahle, amaCrackers awekho!
Ngaphambi kokuthuthela ngase- "Ukugenca kokuziphatha" sizocacisa futhi, igama «Hacker y IPentester », ukuze kungabikho ukudideka okujwayelekile okuvame ukwenzeka kule ndawo yeComputer Science.
Kafushane, a UHacker ngokujwayelekile ingachazwa ngokuthi:
"Umuntu ophatha kahle ulwazi, ubuciko, amasu noma ubuchwepheshe kahle kakhulu noma kahle impela, noma eziningi zazo ngasikhathi sinye, futhi aqhubeke afune futhi akwazi ukunqoba noma ukunqoba ngokutadisha nangokuzijwayeza okuqhubekayo, azincamela yena nabanye , okungukuthi, izikhulu." Iminyakazo Ehlobene: Uma sisebenzisa i-Free Software, ingabe nathi sibaHacker?
Ngenkathi, a IHacker ngamagama ekhompyutha ingachazwa ngokuthi:
"Umuntu o susebenzise ngokungenakugwenywa futhi ubuse ama-ICT, ukuthola ukufinyelela okuphumelelayo nangempumelelo emithonjeni yolwazi nezindlela ezikhona zokulawula (ezenhlalo, ezepolitiki, ezomnotho, ezamasiko nezobuchwepheshe) ukwenza ushintsho oludingekayo ukuze kuzuze wonke umuntu. Ngakho-ke, uhlala efuna ulwazi njalo, kukho konke okuphathelene nezinhlelo zamakhompiyutha, izindlela zabo zokuphepha, ubuthakathaka babo, ukuthi angakusebenzisa kanjani lokhu kuba sengozini nezinqubo ezihambisanayo, ukuzivikela yena nabanye kulabo abakwaziyo ukukwenza . " Ukugenca kanye nePentesting: Shintsha i-GNU / Linux Distro yakho kule nkambu ye-IT
Ngakho-ke, lokhu kusishiya ngakhoke ukuthi a «IPentester » es:
Uchwepheshe endaweni yeComputer Science, omsebenzi wakhe uqukethe ukulandela izinqubo ezahlukahlukene noma izinyathelo ezithile eziqinisekisa ukuhlolwa okuhle noma ukuhlaziywa kwekhompyutha, ngaleyo ndlela, ukuze akwazi ukwenza yonke imibuzo engaba khona mayelana nokwehluleka noma ukuba sengozini ku ihlaziye uhlelo lwekhompyutha. Ngakho-ke, kuvame ukubizwa ngokuthi yi-Cybersecurity Auditor. Umsebenzi wakhe, okungukuthi, ukuphentsa ngempela kuyindlela yokugenca, kuphela lo mkhuba osemthethweni ngokuphelele, ngoba unemvume yabanikazi bemishini ezohlolwa, ngaphezu kokuba nenhloso yokwenza umonakalo wangempela wokulungisa. Ukugenca kanye nePentesting: Shintsha i-GNU / Linux Distro yakho kule nkambu ye-IT
Kuyini ukugenca kokuziphatha?
Ngokuyisisekelo i "Ukugenca kokuziphatha" Yinkambu yokusebenza echaza umsebenzi walabo bachwepheshe abazinikele bona kanye / noma abaqashelwe ukugenca uhlelo lwekhompyutha, ukuze babone futhi balungise ubungozi obutholakele, obuvimbela ukuxhashazwa ngempumelelo "Abaduni abanonya" o "Izikrelemnzi".
Ngakho-ke, kufayela le- "Ukugenca kokuziphatha" Labo abathintekayo bagxile ekuhlolweni kokungena kwezinhlelo zamakhompiyutha kanye nesoftware ukuze kuhlolwe, kuqiniswe futhi kuthuthukiswe ezokuphepha. Kungakho, zivame ukubizwa ngokuthi Kubaduni de "Isigqoko esimhlophe", ngokungafani nabaphikisi babo, okungukuthi, abaHacker Criminal, abavame ukuphatha igama le- "Isigqoko esimnyama". Noma ngamanye amagama, a "UHacker Wokuziphatha" imvamisa kuba yi IPentester futhi a "I-Hacker engekho emthethweni" kungathathwa njenge- "Isigebengu".
Ekugcineni, futhi ukugcwalisa ukufundwa, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kukhona nalokhu okuthiwa "Isigqoko Esimpunga" Kubaduni abavame ukuba phakathi kwezinhlangothi ezi-2, ngoba kwesinye isikhathi benza imisebenzi evame ukungqubuzana ngokombono wokuziphatha, njengokuthi: Ukugenca (ukugenca) amaqembu abawaphikisa noma abawaqhubayo ngokomqondo "I-Hacktivist Cyberprotests" lokho kungadala ukulimala okuqondile noma okubambekayo kwabanye.
Izinhlelo zokusebenza zamahhala, ezivulekile nezikhululekile
Ipulatifomu, uhlelo, uhlelo lokusebenza kanye nesoftware yokuskena amafayela
Izicelo Zokuqapha Inethiwekhi Nokuqoqwa Kwedatha Emithonjeni Yomphakathi
Ipulatifomu Yezokuphepha yeNode
Izinhlelo Zokuvikela Nokulwa Nabangenayo
Ithuluzi Lezobuhlakani, iHoneyspot nokuningi
Izinsiza zokubamba iphakethe lenethiwekhi
Ama-tracker wamanethiwekhi wasekhaya nawomhlaba jikelele
Izinhlelo zokuqoqa imininingwane nokuphatha imicimbi
Ukubethela kwethrafikhi yewebhu nge-VPN
I-PF_RING ZC (Ikhophi yeZero)
Izinhlelo zokuvikela ezihlanganisiwe zezindawo zokusebenza namaseva - i-Firewall
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nalokhu nokunye, ungabheka amawebhusayithi alandelayo, ngesiNgisi, anezinhlu ezinhle kakhulu, ezibuyekezwe kahle: Isixhumanisi se-1, Isixhumanisi se-2 y Isixhumanisi se-3.
Abanye sebevele baphawule ngeBlog
Seluqedile uhlu nokushicilelwa, uma kukhona owaziyo enye insiza ethokozisayo futhi kufanelekile ukufakwa ohlwini olwenziwe, ungasishiya ifayili le- igama kumazwana abekiwe ukuze kamuva siyingeze. Futhi kokunye okuthunyelwe okuzayo sizochaza ezinye zazo ngokuningiliziwe. Okwamanje, futhi ekugcineni, khumbula lokho:
"Abaduni abenzi nje kuphela izinto ezingcono noma ezingakholeki, okusho ukuthi, abagcini ngokuxazulula izinkinga futhi / noma bakhe izinto ezintsha noma ezinamandla abanye abazibona zinzima noma zingenakwenzeka, kepha ngokuzenza bacabanga ngokwehlukile kunesilinganiso, okusho ukuthi, bacabanga ngokwemigomo "Inkululeko, ukuzimela, ezokuphepha, ubumfihlo, ukusebenzisana, ukukhiqizwa kwabantu". Uma ufuna ukuba yiHacker, kufanele uziphathe njengokusho kwalefilosofi yokuphila, uphathe leso simo sengqondo kuwe, usenze ingxenye ebalulekile yobuntu bakho." Ukugenca: Akukhona nje ukwenza izinto kangcono kepha ukucabanga kangcono ngezinto
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana «Hacking Ético» futhi okungenzeka futhi / noma okwaziwa kakhulu Izicelo zamahhala nezivuliwe yaleyo ndawo esingayisebenzisa kwi-GNU / Linux Distro yethu, ukuze sibe ngongoti abahle kakhulu emhlabeni we «Ukugenca Nokugqekeza »; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukugenca Ngokuziphatha: Izicelo zamahhala nezivuliwe ze-GNU / Linux Distro yakho
I-Chrome 88.0.4324.150 ixazulula ukuba sengozini kosuku olungelona
Uhlobo olusha lwe-KDE Izicelo 20.12.2 manje seluyatholakala